na ku saabsan - Bruicojewelry Accessories Co., Ltd
Bruico Jewelry waxay bixisaa adeegyada xirfad-ahaanayta dahabka, design, wax soo saarka iyo processing, inta badan diiradda saaraya 14K iyo 18K ganacsiga mahrajaan. Bruico Jewelry la aasaasay 2015 oo degan degaanka ee 500 mitir oo laba jibbaaran, taas oo uu leeyahay ay warshad gaar ah, makiinado lacagta lagu daabaco, mashiinada qiraan, mashiinada CNC iyo mashiinada korontada.
Waxaan ku siin adeegyada xirfad-design-soo-saarka iyo dahabka. Waxaan ka Yeellay guulaha waaweyn iyo aasaasay koox xirfadeed ee la xiriira wax iibsiga, iibka, admin, maaliyadda iyo suuq-geynta. Currently Shirkadda waxay leedahay 50 shaqaale, 3 samaynta iyo 2 farsamo sawir. Our koox waa yar yahay, waana firfircoon, ruuxaan leh farsamada heer sare ah iyo dareen fashion fiican. Waxaan ka jawaabi karaan looga baahan yahay qofka macaamilka ah ee 48 saacadood gudahood.
Waxaan leenahay waayo-aragnimada hodanka ah ee design iyo wax soo saarka dahabka. tayo sare leh waa la damaanad qaaday oo ku kalsoon tahay. wax soo saarka waxay leeyihiin tiro balaadhan oo ah isticmaalka, sida dabaal dhexeeya Saaxiib, hadiyad u-dalacaada, hadiyadaha dhacdooyinka waaweyn. Amarada ayaa inta badan waxa ay ka soo dukaamada dahabka Misbaax, samaynta banaan iyo yaalaaan.